Shahaadada ITIL - Hagaha Dhameystiran - Iskuulka ITS Tech
Jaantuska shahaadada ITIL:
Faa'iidooyinka Ganacsiga Ganacsiga
Waa maxay sababta shahaadada ITF muhiim u tahay?
Dhiirrigeliya Doorka Wanaagsan ee Ururada:
ITIL Certified Professors ayaa si ku-meel-gaadh ah looga codsanayaa:
Sida loo helo tababar
Warshadaha IT-ga waa hal xaalad oo isdaba joog ah, taas oo ka hartay waxoogaa yar oo aasaasi ah oo ku saabsan fursada ka baxsan in qofku filayo inuu sare u qaado. Si aad uga faa'iidaysato berriga tababarka aqoonsiga waa aasaas. ITIL waa shey la dejiyey ITSM barashada taas oo muhiim u ah xirfadlayaasha ku jira adeegyada IT-ga iyo maamulka IT. Tababbarka Shahaadada ee ITIL wuxuu kaa caawinayaa in aad ka faa'iideysatid beerkan mashruucan oo nadiifinaya jidka mustaqbalka.
Waxaa laga yaabaa inay u muuqato mid adag in la joogteeyo, laakiin ma ahan mid muuqda. Imtixaanka ugu weyn ee warshadani waa in xirfadlayaasha ka jira goobta ay u baahan yihiin in ay sii joogaan si ay u bartaan warshadaha. Xaalada marka la aqoonsanayo farsamooyinka oo kaliya oo ka soo roon kuwa kaliya ee ku socda wakhti wakhti ah oo ka dhigaya hal excel inay fudud yihiin farsamaynta hannaanka leh isbedelada joogtada ah. Ku soo qaadashada barashada nasiib darrada berrinka ayaa caan u ah in ay barto. Koorsada shahaadada ITIL waxay ka caawisaa mid ka mid ah inuu xoog ku qaado beerta wuxuuna kaa caawinayaa inaad sii joogto kooxda.
Baaritaan la taaban karo oo muhiim ah iyo saameyn ku leh ITIL Tababar la siiyay oo aan la shaacin ayaa shaki kugula talin doona saameynta kooraska uu ku yeelan karo ujeedada wax soo saar leh.
Fikradda ITIL waxaa la yaab leh oo lagu abuuray Great Britain iyadoo 1980 ay tahay, in la sameeyo qorshe wax qabad oo loogu talagalay caawimada IT-ga ee ururada dawlada. Tan iyo markii la aasaasay, waxaa lagu heleyaa astaanta ITIL, la badeley loona ballaariyey si loo gaaro tallaabooyinka ugu dambeeyay ee wareega wareegga IT-da. Nidaamka dhamaystiran ee aan maanta haysanno ITIL ayaa si tartiib tartiib ah u kormeeraya adeegyada IT-da si ay u ururiyaan dhammaan noocyada kala duwan.
Macluumaadka Aqoonsiga Tiknoolajiyada Macluumaadka Tiknoolajiyada, ITIL waxay xoogga saaraysaa isticmaalka adeegyada IT si ay u fuliyaan shuruudaha ganacsiga. Waa qorshe ku saabsan habka loo yaqaan 'ITSM' (Maamulka Adeegga IT-da) oo maamula foomamka, istaraatiijiyada, waxqabadka iyo baaritaanada kuwaas oo aan si kastaba ha noqotee urur-gaar ahaaneed, laakiin waxay ku xirnaan kartaa urur kasta si loo abuuro qiimaha istiraatijiyadeed ee urur. ITIL waxay bixisaa marxalado ururro meeshii ay qorsheyn karan, cabbiraan oo ay wax ka beddelaan hagaajinta isbedelka.
Inaad noqotid qaab dhismeedka ugu ballaadhan ee dhismaha maanta ITIL waxaa isticmaala ururada si ay u kormeeraan adeegyada IT. Waxay ka caawisaa macaamiisha inay kordhiso ka qayb qaadashada joogtada ah iyagoo adeegsanaya adeegyo kala duwan oo kala duwan oo bixiya qorshe si ay wax uga qabtaan arrimaha ganacsigooda. Meelaha ITIL waxay caawiyaan xuduudaha isgoysyada ah ee kori kara horumarinta qaababka IT-ga ka dib markaan ka caawino fulinta adeegyada tayada leh.
ITIL waxay ka caawisaa macaamilka ganacsiga isbedelka baddalka maaliyadeed ee isbeddelka iyo suuqyada suuqa oo hagaajiya waddada loogu talagalay hagaajinta dheeraad ah oo gacan ka geysta sidii loo fulin lahaa ganacsi ka fiican. Ururo badan oo caalami ah oo la aqoonsan yahay sida Microsoft, IBM, ayaa ka faa'iideystey khiyaamaynta si ay si wax ku ool ah u fuliyaan ITIL ee maamulka farsamada.
TALAALKA ITIL wuxuu awood u siinayaa in shaqaalaha oo dhan ay ku guuleystaan ​​natiijada ka soo baxda ururka, fahamka weynaanta isku midka ah, ururrada yaryar oo intaa dheer waxay siiyaan tababar ku dhow iyaga oo isticmaalaya nidaamka ITIL inta ay sidoo kale taageerayaan wakiilladooda ' Shahaadada ITIL qodobbada loo rogayo.
Macmiilka ITIL waa la dhammaystiri karaa kadib marka la qaato heerarka ka dambeeya ee la siiyay hoosta:
Heerka aasaasiga ah ee ITIL - Sida magacu soo jeediyo, tani waa heerka asaasiga ah ee tababarka ITIL. Inaad noqoto heerka aasaasiga ah ee shahaadada ITIL waxay soo bandhigaysaa musharixiinta leh macluumaadka asalka ah ee ereyada iyo bixinta qaabdhismeed ee dhismaha muhiim u ah adeega ITIL. Waxay ku lug leedahay dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka u ah tababarrada kuwaas oo ku cusub fikradda IT.
ITIL Dhakhtarka -Waxaa ku jira 2016, Dhakhtarka ITIL waa qaybta ugu dambeysa ee shahaadada ITIL. Iyadoo loo marayo ITIL xirfadle musharrixi ayaa si cad u qeexaya si loo muujiyo isticmaalka dhismaha ITIL si loo xoojiyo bartilmaameedyada ganacsiga. Heerkani waxa uu diiradda saarayaa musharixiinta la yaqaan ee leh maareynta isbeddelka urur, is-beddelka, iyo qiyaasta iyo cabbiraadda.
Heerka dhexdhexaadka ah ITIL - Heerka qadiyadani waxay fursad u helayaan in ay eegaan isbedelada nidaamyada nidaamka ITIL oo ku tiirsan baahidooda iyo danahooda. Labada qaybood oo ka mid ah qaybahaas waxay maamushaan Adeegga Nolosha Adeegga iyo Awooda Adeegga. Inkasta oo hore ay ka mid tahay barashada macaamiisha macaamiisha kala duwan ee lagu qeexay ITIL marka dambe waxay keenaysaa waxyaabaha muhiimka ah ee macluumaadka habka gaarka ah.
ITIL khabiir - Ku darista macluumaadka horayba u yaqaan heerkani wuxuu u adeegsanayaa fahamka iyadoo la jarayo daqiiqado yar oo ah qaabka ITIL iyo nidaamka.
ITIL Master - Heerkani waxa loogu talagalay kuwa fahamsan kuwaas oo daneynaya hababka diyaarinta iyo maareynta. Heerka ugu dambeeyay ee tababarka ITIL oo ka dhigaya kuwa fahmiya inay go'aamiyaan beerta waxayna siiyaan hubaal si ay u wajahaan qaabdhismeed dhab ah.
Iyadoo ururada ITIL qaarkood ay faa'iido u leeyihiin maadaama ay siinayso hab xooggan oo ku wajahan daacadnimada macaamiisha isla markaana ay sii wanaajiso wax ku oolnimada. Iyada oo la adeegsanayo macaamiisha ITIL si wax ku ool ah u isticmaali karaan kala duwanaanshahooda oo ay la kulmayaan taas oo ka fogaanaysa ku celcelinta shaqada. Maadaama aad indhahaaga indhaha ku hayso qaybaha daciifka ah ee ururkaaga, iyada oo ITIL u aqoonsan karti ku filan maamulka waxaad ku dari kartaa iyaga oo isticmaalaya aqoontooda iyo xirfadooda. A waxa ka sarreeya wixii hore u fiicnaa waa ITIL si loo hubiyo ROI ama Soo Celinta Maalgashiga. Iyada oo ay jiraan tiro badan oo ka mid ah qodobbada odhaahda, waxay ururadu marnaba ka dhigi karaan suurtogalnimada in ay heshiis la galaan Master ITIL. Waxyaabahan la ogaan karo ee ururku waxay kordhiyeen danaha xirfadlayaasha shahaadada leh ee ITIL.
Inaad noqoto nidaam aad u sarreeya oo caalami ah oo ogaaday isticmaalka adeegyada IT-ga ee ururada kala duwan, tababar ITIL ayaa ciriiri ku ah musharaxa tartan wanaagsan oo berrinka ah. Ogaanshaha wax ka bedelida isbeddelka cusub waa mid marwalba faa'iido leh waxayna ku siineysaa meel sarreeya dadka kale. Maadaama aad taqaano daqiiqadaha, ka dib markii aad heleysid shahaadada ITIL waxaad leedahay khasaare badan oo ah inaad liis gareysatid si xirfad leh.
Miisaanka xiisaha ee shahaadada ITIL
Xirfadlayaasha IT-ga ee haysta shahaadada ITIL waxaa lagu qiimeeyaa ganacsiyo helay qaabka ITIL. Isbeddel muuqaal ah, kiis kasta, waa furfurnaanta ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah (SMB) iyo ururada xagga shaqaalaha oo leh shahaadada ITIL. SMB maanta ayaa si buuxda u fahansan qiyaasta ITIL si fiican u aqoonsatay sababtoo ah caalamka horumarka ee suuqa. Tiknoolajiyada hadda waxay u baddaleen ganacsi caan ah, iyo isku dayga SMB si ay ugu faa iideystaan. Urur la'aan, wax yar ama wax yar uma baahna inay wajahaan niyad-jabka wali sababtoo ah sababaha miisaaniyadda SMB ee ugu badan ee aan haysanin maaraynta niyad-jabka, illaa waqtigan horay u soo mareyna waxay si weyn u qiimeeyaan aqoonta ITIL.
Shahaadada ITIL waxay muhiim u tahay agaasimayaasha IT-da, oo ka hortagaya faa'iidada IT-ga maalin kasta. Tan iyo, qayb weyn oo ka mid ah agaasimayaasha ganacsiga ayaa ogtahay habka hormarinta ee IT-da, muddada dheer iyaga oo ka fikiraya aqoonsiyada ITIL. Waxaa laga yaabaa inaysan horay u sii wadi karin in ay noqdaan macalinka ITIL, xitaa macluumaadka muhiimka ah ee isku midka ah ayaa ka caawin kara iyaga inay jahawareeraan nidaamka ITIL.
Marka laga reebo caan ah oo inta badan raadiya khibrad ka dib markii ay caddaynayso ITIL waxay hoos u dhigtaa faa'iidooyinka hoos u dhigta dhulka sida:
Shahaadada ITIL waxay farta ku fiiqaysaa aqoontaada IT-ga. Kaliya maaha inaad ka warhesho codsiyada isbeddelka ah oo ay ku kordhinayso aasaaska joogtada ah ee IT-ga. Maadaama dhismaha ITIL uu yahay nidaam ah qaababka soo bandhigay farsamooyinka kale duwan, casriyeynta macluumaadka la midka ah waxay hagaajinaysaa xirfadlayaasha si fudud oo si siman u shaqeynaya hadana qadarin iyo natiijooyin degdeg ah.
Musharaxa ITIL ee la aqoonsan yahay ayaa ah faaiido xooggan oo ah urur kaas oo markaas ka dhigaya kuwo ugu haboon ee bandhigga shaqeynta.
Iyadoo la kobcinaayo tirada maxaabiista ITIL ee ururada qaaliga ah, shahaadada waxay ku nadiifisaa musharax waxayna siinaysaa farshaxanka loogu talagalay in lagu aqoonsado xirfadaha ugu fiican ee suuqa. Murashaxa rasmiga ah ee ITIL sidoo kale wuxuu leeyahay meel sarre leh oo lagu xallin karo go'aamada iyaga oo tixgelinaya qaybaha iyo waajibaadka ururada.
ITIL waxay leedahay khadad la leh ISO / IEC 20000 tallaabooyin ka dambeeya oo soo jeedinaysa in aan loo baahnayn meel kasta oo mustaqbalka ah. Intaa waxaa dheer, in ka badan ururada 800 oo leh ISO / IEC 20000, shahaadada ITIL ee haysta shahaadada xirfadlayaasha ah waxay sii wadaan inay noqdaan hargabka. Waxay u taagan yihiin jilicsanaanta dadka kale sababtoo ah macluumaadka suurtagalka mawduuca.
ITIL-da shahaadiga ah haddii shaabadeyntu ay sidoo kale dooran karto inay halis galiso heer caalami ah iyada oo aan isbedelka xirfadda shaqada. In ka badan ururada 10,000 caalamku waxay yeesheen qaab dhismeedka ITIL, ka dibna waxay ku fashileen fursadaha mustaqbal wax soo saar leh oo dibadda ah.
Shahaadada ITIL waxay dhistaa qulqulka mushaharka iyo horumarinta. Mushaharka ITIL oo caadi ah ayaa caadi ahaan hela mushahar kordhin sare oo weliba wuxuu leeyahay xafiis heer sare ah oo xafiis.
Tababarka ITIL oo rasmi ah oo faahfaahsan ayaa furan iyada oo loo marayo koorasyo ​​badan oo internetka ah. Wax kale oo aan ka ahayn koorsooyinka hagar-bixinta ee internet-ka ah ayaa ka jaray barashada iyo tababaraha fasalka fasalka fasalka ku daray in ay sii wanaajiyaan hagaajinta macluumaadka ITIL. Tababarka ITIL oo ay bixiyaan ururada shahaadiga ah waxay damaanad qaadayaan in murashaxiinta ay ku dhiirigeliyaan inay wax ka ogaadaan arrimo la mid ah qabsashada koorsada ay ku haboonaanayso rabitaankooda iyo ujeedooyinkooda.
In ka badan ama ka yar, qof u qalma ITIL ayaa marnaba ka hor imaan kara maqnaanshaha fursadaha laga filayo xiisaha sii kordheysa ee dhismaha. Inaad haysato shahaadooyin heerar kala duwan ee tababarka ITIL waxay caawimaan khabiiro maamulo kala duwan oo ah wareegga IT. Xirfadlaha ITIL oo shahaadada haysta ayaa shaki ku sii jiri doona saxarada xoojinta ee horumarka iyadoo loo marayo xawaaraha iyo xajinta.
Saamaynta Worlds of DevOps, ITIL & Agile